Ucocekile kwaye ucoce amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela labucala
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguTommi
Amagumbi okulala amabini abucala / igumbi lokuhlambela elinye kwelinye icala lekhaya lethu elineebhedi ezitofotofo kakhulu (ubukhulu benkosi kunye nokumkanikazi), iTV yekhebula kuphela kwigumbi elinebhedi yaseKing. Ibekwe kumbindi phakathi kweSiqithi sasePadre, eBrownsville naseHarlingen. Siyakonwabela ukusingatha abantu, izibini okanye iintsapho ezincinci.
Mna nomyeni wam sihlala ekhaya kodwa uzakuba nemfihlo ezininzi kwicala lakho lendlu. Wamkelekile ukuba usebenzise ikhitshi lethu ukuba ukhetha ukuzilungiselela ukutya kwakho. Imibuzo? Ndithumele umbuzo.
Ikhaya lethu elithandekayo liku-1.5 yeehektare zepropathi engaphambili ye-resaca. Ngokuhlwa, unokubukela ilanga litshona phezu kwe-resaca ngelixa uhleli kwiveranda yangasemva. I-resaca ayifanelekanga ukuqubha, nangona kunjalo ezinye iindwendwe zikonwabela ukuloba ngasemva kwiyadi ye-catfish. Nceda uze nezixhobo zakho zokuloba.
Uncedo lwasekhaya lubandakanya iWalmart, iindawo zokutyela ezahlukeneyo zaseMexico, Inkukhu yeCawe, iDQ, iiCaesars ezincinci kunye neMcDonalds.
4.99 · Izimvo eziyi-185
Le ndawo yaseMazantsi eTexas yaziwa ngokuba yiparadesi yeentaka. Ngaphakathi kumgama ozimayile ezingama-50 kukho iipaki ezininzi zikarhulumente kunye neendawo zokuhlala zeentaka.
Isiqithi esihle saseMzantsi Padre yimizuzu engama-25 kuphela yokuqhuba. Ukususela kwiSikhumbuzo ukuya kwiSuku lomSebenzi, ulwandle luneziqhumane ezimangalisayo ezibonisa ngoLwesihlanu kunye (ngamanye amaxesha) ngoMgqibelo ebusuku. (Inokutshintsha ngenxa ye-Covid-19)
I-US-Mexico yeMbali Buff? Iikhilomitha ezi-6 kuphela kude yiPalo Alto Battlefield.
Uyonwabele umyezo wezilwanyana? IBrownsville inomZoo wezilwanyana iGladys Porter.
Umbuki zindwendwe ngu- Tommi
Ababuki zindwendwe bahlala emakhayeni abo kwaye basoloko bekulungele ukuphendula imibuzo okanye ukuba luncedo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Los Fresnos